Junior Win (ဂျူနီယာဝင်း) : September 2007
ညိုမြ ၏ ကလောင်သမိုင်း ၊၁၉၇၁ အိုးဝေဂျာနယ်၊ စာရေးဆရာ မောင်ထင် ၏ အနာဂတ္တိကျမ်း နှင့်အခြားဝတ္ထုများ၊ အမှတ် ၁၈၆ အတွေးအမြင် မှ မြဟန် ၏ မြန်မာစာရေးဆရာများနှင့် အိတ်ဂျီဝဲ
တို့တွင် ရေးသားသမျှကို ယခုလို ထုတ်နှူတ်တင်ပြလိုက်ပါတယ်။
သိပ္ပံနှင့် လူမူရေးဝတ္ထုရေး ကမ္ဘာကျော်စာရေးဆရာကြီး အိတ်ဂျီဝဲ (Herbert George Wells)H.G.Wells (၁၈၆၆-၁၉၄၆) သည် ၁၉၃၉ ခုနှစ်တွင်မြန်မာပြည်သို့လာလည်ခဲ့သည်။ သူမြန်မာပြည်ရောက်နေစဉ် ၁၉၃၉ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ (၂ ) ရက်နေ့တွင် မြန်မာစာရေးဆရာ (၄၆) ယောက် တို့ကဆရာကြီးအားရန်ကုန်တက္ကသိုလ်လှေလှော်အသင်း၌လက်ဘက်ရည်ပွဲနှင့် ဂုဏ်ပြုဧည့်ခံခဲ့ပါသည်။
ဒေါက်တာထင်အောင်၊ ဆရာကြီးဂျီအိတ်လု(စ်)၊ ဒဂုန်ဦးစန်းငွေ၊ ရွှေညာမောင်၊ မိုးကြိုးဦးအုန်းခင်၊ ဦးစောဦး၊သင်္ခါ၊ ရဲထွဠ်၊ ရဲသမိန်၊ ဦးစံထွား၊ ဆရာဇမ္ဗူသံ၊ ဦးဖိုးကျား၊ နယူးဘားမားဦးတင်မောင်၊ သူရိယဦးသိမ်းမောင်၊ သူကြီးဂေဇက်ဦးခင်မောင်၊ မဟာဆွေ၊ ဒဂုန်နတ်ရှင်၊ လူထုဦးလှ၊ မြဒေါင်းညို၊ ဆရာတက်တိုး၊ကိုဘအေး၊ မောင်အာယု၊ ဦးညိုမြ၊ ဒဂုန်တာရာ၊ သိပ္ပံစိုးလှ၊ ခင်လေးမောင်၊ ထင်ကြီး၊ သိန်းဖေမြင့်၊ ကိုတင်ညွန့်၊ ကိုတင်အေး၊ သုခ၊ တက္ကသိုလ်ဆုမြိုင်၊ ဒဂုန်ဦးလှဘူး၊ ဦးသန်းဖေ၊ ဦးမောင်မောင်ကျော်ဝင်း၊ ပန်းဝတ်ရွှေ၊ ဦးရန်အောင်၊ ဇ၀န၊ ဦးချစ်မောင်၊ မြမျိုးလွင်၊ သော်တာစန်း၊၊ခင်မျိူးချစ်၊ ဒဂုန်ခင်ခင်လေး၊ သိပ္ပံကျော်ထင်၊ ဦးမောင်မောင်ပြေ နှင့် ဇာနည်ဆွေ တို့တက်ရောက်ကြသည်။
ဆရာကြီး H.G.Wells မြန်မာပြည်ရောက်လာချိန်သည် ရန်ကုန်မြို့ကျောင်းသားများဆန္ဒပြပွဲတွင် ဗိုလ်အောင်ကျော်ကျဆုံးစအချိန်ဖြစ်သည်။အိတ်ဂျီဝဲအားစာရေးဆရာမကြီးဒေါ်ခင်မျိူးချစ်သည်အင်္ဂလ်ိပ်အစိုးရ၏ ဆိုးသွမ်းရက်စက်ပုံနှင့် ဗိုလ်အောင်ကျော်ကိုပုလိပ်များရိုက်၍သေရပုံကို သွေးစွန်းနေသော လက်ကိုင်ပုဝါ နှင့်အင်္ဂလိပ်လိုထိုအဖြစ်အပျက်ကိုရေးထားတဲ့စာရွက်တစ်ရွက်၊ဗိုလ်အောင်ကျော်ကိုပုလိပ်များရိုက်နှက်နေ
သည့်ဓာတ်ပုံတို့ကိုထုတ်ပြပြီးပြောပြခဲ့သည်။ ထိုအကြောင်းကို ဆရာမကြီးကသူ့မြေးသားသမီးများကို ဂုဏ်ယူစွာ ပြောပြခဲ့သော ကြောင့်ယခုကဲ့သို့မှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ဆရာကြီးH.G.Wellsကသူအင်္ဂလန်ပြန်ရောက်သောအခါဗိုလ်အောင်ကျော်ကျဆုံးရသည့်အရေးအခင်းအ ကြောင်းကို “Trouble in burma “ ခေါင်းစဉ်ဖြင့် NEWS CHRONICLE သတင်းစာ၌ ဗိုလ်အောင်ကျော် ကိုပုလိပ်များကရိုက်နှက်နေပုံပါသည့်ဓာတ်ပုံနှင့်တကွ ဖော်ပြခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံသို့ ၁၉၃၉ ခုနှစ်တွင် ရောက်ရှိရာ မြန်မာစာရေးဆရာများနှင့် တွေ့ဆုံ၍စာပေရေးရာများ၊ ဗြတိသျှ လက်အောက်မြန်မာပြည်၏ အခြေအနေများကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ အိတ်ဂျီဝဲ နှင့်စုဝေးတွေ့ဆုံကြခြင်းကို အကြောင်းပြု၍ မြန်မာပြည်၌စာရေးဆရာအသင်းတစ်ခုထူထောင်ရေးအတွက်စတင်လှူပ်ရှားအကောင်အ ထည်ဖော်နိုင်ခဲ့သည်ဖြစ်ရာ အိတ်ဂျီဝဲ နှင့်ပတ်သက်၍မြန်မာစာရေးဆရာလောက၌ ယနေ့တိုင်ပြန်ပြောင်း ပြောကြရဆဲဖြစ်ပါသည်။
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်(ပင်မ) အဓိပတိလမ်းအ၀င်ဝ လက်ယာဘက်တွင်ယနေ့တိုင် ရှိနေသော ဗိုလ်အောင်ကျော် အမှတ်တရကျောက်တိုင်
Posted by Junior Win at 12:48 AM No comments:
English for all ဧပြီ ၂၀၀၅ တွင်ဖော်ပြခဲ့သော H.W.Longfellow ၏ The Arrow and The Song
ကဗျာကို ဂျူနှီယာဝင်း က အခုလိုခံစားထားကြောင်းပါ။ အခုအပတ်က Friends of the Week လို့ ကြားမိပါတယ်။ ဒီတော့ ကဗျာတွေနဲ့ အဖော်လုပ်နေရတဲ့ ကဗျာဆရာ Longfellow က ဘယ်လိုများ သူငယ်ချင်းဖွဲ့နေသလဲဆိုတာစိတ်ဝင်စားစရာပါပဲ။
I shout an arrow into the air,It fell to earth, I knew not where;
For, so swiftly it flew, the sightCould not follow it in its flight.
I breathedasong into the air,It fell to earth, I knew not where;
Long, long afterward, in an oakI found the arrow,
still unbroke;And the song, from beginning to end,
လေထဲတိုးဝင်သွားတဲ့မြားဟာ တစ်နေရာရာမှာ ကျသွားသလို
တချိန်ချိန်မှာ ၀က်သစ်ချပင်တစ်ပင်မှာ စိုက်နေတဲ့ မြားကို
ကဗျာဆရာဟာလည်း သူရေးဖွဲ့လိုက်တဲ့ ကဗျာကို
ခံစားဖတ်ရှုနေတဲ့ သူစိမ်းတစ်ယောက်ကို ရှာတွေ့ချင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ သူစိမ်းတစ်ယောက်နဲ့ သူငယ်ချင်းဖွဲ့လိုက်နိုင်ပါတော့တယ်။”
Posted by Junior Win at 9:39 PM No comments:
Posted by Junior Win at 12:42 AM No comments:
ဟောဒီ အပတ် Give meabreak! ဂဏ္ဏမှာ ကာတွန်း မောင်ရစ် ရဲ့ လက်ရာကိုတင်ပြလိုက်ပါတယ်။ တချိန်တုန်းက ရန်ကုန်စက်မှုတက္ကသိုလ်မှာ.......................
ကာတွန်း ဘောက်(စ်) ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီတုန်းက စက်မှုတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားမောင်ရစ် က သူ့ရဲ့ ကျောင်းတော်ကြီးက ကာတွန်းဘောက်(စ်) အကြောင်းကို အခုလိုပုံဖော်ထားကြောင်းပါ။ ကာတွန်း ဘောက်(စ်) Cartoon Box မှာ စက်မှုတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေရဲ့ လက်ရာ ကာတွန်းတွေ၊ စာတိုစာစတွေ၊ ရင်ဖွင့်သံတွေ အခုလို ရှိခဲ့ဖူးပါသတဲ့။
ယခုခေတ် တော့ အဲဒီလိုရင်ဖွင့် စရာ Box မျိူးကို မမြင်ဖူးမတွေ့ဖူးကြမှာပဲလို့ တွေးလိုက်မိတာနဲ့ပဲ...........။
Posted by Junior Win at 11:57 PM No comments:
ချယ်ရီ မဂ္ဂဇင်း ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၀၆ တွင်ဖော်ပြခဲ့သော ဂျူနီယာဝင်း ၏ စိတ်ပြောင်းသွားတဲ့သူငယ်ချင်း
Salvador Novo (၁၉၀၄) စာရေးဆရာ ကဗျာဆရာတစ်ဦးက နပိုလီယန် လို့အမည်တွင်တဲ့သူငယ်ချင်းတစ် ယောက်ကိုရည်ရွုယ်ပြီးစာတပုဒ်ရေးဖွဲ့ခဲ့ပါတယ်။ နပိုလီယန် ဆိုတာစစ်ဗိုလ်ချူပ်ကြီးအမည်ဖြစ်ပေမယ့်သူဆို လိုတာက နပိုလီယန် ကဲ့သို့စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်ပြီးရည်မှန်းချက်ကြီးမားလွန်းသူတစ်ဦးကိုဆိုလိုပုံရပါတယ်။သူ့ သူငယ်ချင်းအမည်ကို နပိုလီယန် လို့ပေးလိုက်တဲ့အတွက် နပိုလီယန်စစ်ဗိုလ်ချူပ်ကြီးရဲ့သကေတတွေစိတ် ဓာတ်တွေ ရည်မှန်းချက်ကြီးမားတာတွေ အကုန်ပါသွားပါတယ်။လွယ်လွယ်နဲ့ရည်မှန်ချက်ကို စွန့်လွှတ်မယ့် သူမဟုတ်တဲ့သုတစ်ယောက်အကြောင်းမို့စိတ်ဝင်စားစရာပါ။ Salvador Novo ရဲ့စိတ်ပြောင်းသွားတဲ့ သူငယ် ချင်းနပိုလီယန်အကြောင်းရေးဖွဲ့ထားတဲ့စာတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်နေ့မှာသူငယ်ချင်းနပိုလီယန်ကသူ့ဆီစာရေးပါတယ်။နပိုလီယန်ရဲ့စာထဲမှာ သူတက်နေတဲ့ကျောင်းတော် ကြီးနဲ့သူသင်နေရတဲ့စာတွေကိုအထင်တကြီးတက်တက်ကြွကြွဖြစ်နေပုံရပါသတဲ့။
Nepoleon writes me ;
The school very big
we get up very early
we spoke nothing
but english ,
I’ m sending you the picture of the building......
သူငယ်ချင်းနပိုလီယန် ကသူတို့၂ဦးငယ်စဉ်ကပျော်ရွှင်စရာအမှတ်တရရေးပါတယ်။သူတို့နှစ်ဦးဘယ်လိုပျော် စရာကလေးဘ၀သတွေကိုကုန်လွန်ခဲ့ကြပါသလဲ။
We won’ t steal candy together anymore from the cupboards,
or run off to the river to halfdown ourselves,
or snitch the bloodstained water-melons...
ပြီးတော့ ဖရဲသီးနီနီလေးတွေလဲ မခိုးစားနိုင်ကြတော့ဘူးလေ။’
နပိုလီယန်ရဲ့ ကျောင်းသားဘ၀က ယခုလိုပါ။
I ‘m ready now for my 6th year exam ;
as far as I can make out ,
afterwards I ll learn everything you ought to learn ,
I’ ll beadoctor,
I’ ll have ambitions,abeard, long pants.....
‘ငါကတော့ အခု၆နှစ်မြောက်စာမေးပွဲကိုဖြေဖို့အသင့်ဖြစ်နေပါပြီ၊
မင်းလို ငါလို ကျောင်းသားတိုင်းတတ်သင့်တတ်ထိုက်တဲ့၊
ရည်မှန်းချက်ကြီးကြီးမားမားနဲ့ ရှင်သန်ခဲ့သူ သူငယ်ချင်းနပိုလီယန်က သု့မှာသားတစ်ယောက်ရှိလာရင်ဘယ် လိုများဖြစ်စေချင်မှာတဲ့လဲ။
But if I haveason,
I ll see that no one ever teaches him anything
I want him to be lazy and happy........
the way I never could because of my parents .
nor my parents , nor my grandparents because of God.
သူ့ကိုဘယ်သူ့ကမှ ဘာကိုမှ မသင်စေရဘူး၊
ရည်မှန်းချက်ကြီးမားတဲ့သုငယ်ချင်းနပိုလီယန် က Salvador Novo ဆီသို့ပေးပို့ခဲ့သောစာတစ်စောင်ဖြစ်ပါ တယ်။သူ့စာတစ်စောင်ကိုဖတ်ပြီးသွားတဲ့အခါကိုယ့်မှာသားတစ်ယောက်ရှိ၇င်သူ့ကိုဘယ်လိုများကြီးပြင်းလာ စေချင်မှာပါလိမ့်....လို့တွေးလိုက်မိပါတယ်။ဒီအဖြေဟာ ကိုယ်က နပိုလီယန်လောက်ရည်မှန်းချက်ကြီးမား လွန်းသူတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့သည်၊မဖြစ်ခဲ့သည်ဆိုတဲ့ပေါ်မှာတည်နေတယ်မဟုတ်ပါလား။
Posted by Junior Win at 11:22 PM No comments:
ကဗျာဆရာ စာရေးဆရာ မောင်သ်ာက(ဘသော်) ၏ နှစ်သစ်ဦးချစ်ဦးလက်ဆောင် ဟုအမည်တွင်သော
ဘာသာပြန်ကဗျာစာအုပ်ထဲက မောင်သ်ာက ၏ အမှာစကားဖြစ်ပါသည်။
ကဗျာရေးသားခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ကျွှန်တော်ကဲ့သို့သောဆောင်းပါး ၀တ္ထုရေးသူတစ်ဦး မည်သည့်အတွက် ကြောင့် ကဗျာရေးသည့်ဘက်သို့ဦးလှည့်သွားရသနည်း ဆိုသည်ကိုကျွှန်တော့်ကိုယ်စား T.S.Eliot(things) ၏ ကဗျာကပင်သက်သေထူသွားပါလိမ့်မည်။
တိကျကုန်စင် သိမြင်နိုင်ပေလိမ့်မည်။ ။
အထက်ပါကဗျာတိုလေးသည် ကျွှန်တော့်ကိုယ်စား အားလုံးကိုတင်ပြသွားပြီးဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ ကဗျာမြတ်နိုး သူစာဖတ်ပရိသတ်များ ကြည်နူးရွှင်မြူးနိုင်ပါစေဟု ဆုတောင်းပတ္တနာ ပြုလိုက်ပါသည်။ မြန်မာပြန်ကဗျာများ ၏ခေါင်းစဉ်မှာ ကျွှန်တော့်ခံစားမူအရပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
Posted by Junior Win at 10:14 PM No comments: